पहिलो पटक 'फ्री' मा अनमोलले स्टेजमा कम्मर मर्काउने | Jukson
पहिलो पटक 'फ्री' मा अनमोलले स्टेजमा कम्मर मर्काउने
साउन २४, पोखरा
पोखरामा आगामी भाद्र १६ गते ‘अनमोल ईभ — २०१८’ हुने भएको छ । नेत्रहिन महिला संघको सहयोगार्थ हुन लागेको कार्यक्रममा अनमोलले बिना पारिश्रमिक आफ्नो प्रस्तुति राख्नेछ्न । पछिल्लो समयको चर्चित नायक अनमोल केसीले स्टेजमा कम्मर मर्काउन लागेको यो पहिलो पटक हो । पहिलो पटक स्टेजमा त्यो पनि 'फ्री'मा अनमोल केसीले नाचेर अनि गायर आफ्नो फ्यानहरु लाई मनोरंजन दिने आयोजकले जनाएका छन।
‘अनमोल ईभ' मा अनमोल सगंसगै प्रियका र भिटेनको पनि एकसाथ स्टेजमा प्रस्तुती रहने छ । मोनिका ईन्टरनेशनल र स्पेक्स १४ को आयोजनामा पोखराको अमरसिहं चौरमा कार्यक्रममा हुने विहीबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जनाईएको छ ।
पोखराको पर्यटन पर्वद्धन गर्ने उदेश्यले आयोजना गर्न लागिएको ईभमा अनमोल सहित प्रियंका कार्की ,भिटेन,डिजे ससपोईजन,डिजे बिरेन तथा ड्रिमर्ज ब्यान्ड लगायत स्थानिय प्रतिभाहरुले पनि आफ्नो प्रस्तुति राख्ने ईभका संयोजक कमल जिसीले बताए ।
दिउसों २ बजेबाट सुरु हुने कार्यक्रममा प्रवेश गर्न रु ३ हजार ,१ हजार र ५ सय सहित न्युनतम २ सय सम्मको टिकट खरिद गर्नुपर्ने उनले भने । कार्यक्रमबाट आम्दानी भएको रकमको लागत कटाएर नेत्रहिन महिला सघं नेपाललाई सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको जिसीले भने । कार्यक्रम पोखरा सहित बुटवल ,चितवन ,झापा र काठमाडौंमा पनि आयोजना गरिने उनको भनाई थियो ।
अनमोल ईभ पोखराका व्यावस्थापक एवम स्पेक्स १४ का प्रमुख महेश्वर भण्डारीले कार्यक्रम सफल पार्न कलेज क्याम्पेन, पोखरा आशपास क्षेत्रका नगरपालिका गाउँपालिकामा सडक नाटक गरिने बताए । कार्यक्रमलाई सफल पार्न मुख्य प्रायोजनमा राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त किङफिशर बियर रहेको उनले भने । यस संगसंगै एक्सेस एडुकेशन, सेगा कम्प्युटर्स र टाटा नेक्जनले सहप्रायोजन गरि साथ दिईएको, उनले भने, सहयोगी संस्थाहरुमा रोट्रयाक्ट क्लब अफ अन्नपुर्ण, ईन्फरम्याटिक्स कलेज, लायन्स क्लब अफ पोखरा ब्युटी सिटी, वि आर वान, एग्बोसा तथा न्युुक्लियस रहेका छन ।
नेत्रहिन महिला संघ नेपालकी उपाध्यक्ष सरस्वती आचार्यले आफनो संस्थालाई सहयोग गर्ने हेतुले यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको खबरले आफुमा हर्ष आएको बताईन । हाम्रो संस्थामा आर्थिक अभाव छ । यस्तै विभिन्न संस्थाहरुले सहयोग गरेरनै हामी चलिरहेका छौ । नेत्रहिन महिलाहरुलाई पुर्नस्थापित गर्न उनिहरुलाई सहज जिवनयापन गर्ने वातावरण मिलाउने हेतुले संस्थाको स्थापना गरिएको उनले भनिन् ।
करिब १ करोड ६ लाखको खर्च गरि आयोजना गरिने ईभलाई सफल पार्न नेपाल हयुमन राईट्स फाउनडेसनले समन्वय गरेको छ ।
नेपाली फिल्म ‘ब्ल्याक’ टोली पोखरामा : सकेसम्म फरक भूमिकामा देखिने प्रयासमा आंचल
नेपाली मुभी 'जय शम्भु' मा साउथ मुभीको टेस्ट
टाउको दुख्नुको कारण यस्तो छ ? बच्ने उपायहरु ??
प्रधानमन्त्री देउवा पोखरा अाइपुगे
फष्टलुकमा यस्तो देखियो रोजको ‘मेरो पैसा खोई’